Unetbootin, chishandiso chakakura kugadzira bootable usb | Linux Vakapindwa muropa
Unetbootin, chishandiso chikuru chekugadzira mabhatani pendrives
Anenge makore gumi apfuura, vashandisi veGnu / Linux vaifanira kuwana kana kupisa cd kana dvd kuitira kuisa Gnu / Linux. Maitiro acho akanetesa kana kuwedzera kugovera kwaida kuvandudzwa uye takanga tisina kubatana kweInternet, nekuti pamusoro pekuda kwekubatanidza nekukurumidza taidawo kuve nemadhisiki asina chinhu ekunyora mifananidzo yeIO.
Kuzivikanwa kwepeni kudhiraivha kana madhiraivha e USB kwareva kuti zvese izvi zvakapfuurwa nekuda kwekureruka uko data rakadzimwa nekunyorwa pamwe nekubata kwayo, kutakurika uye nemutengo wayo wakaderera. Zvakare, yazvino BIOS inogadzira iyo pendrives inogona kurodha ISO mifananidzo yeGnu / Linux uye nekudaro michina yakanaka yekumisikidza chero kugoverwa kweGnu / Linux.
1 Chii chinonzi Unetbootin?
2 Ungaiwana kupi?
3 Chii chandinofanira kushandisa Unetbootin?
4 Mashandisiro ekushandisa Unetbootin?
5 Ndedzipi dzimwe nzira dziripo kune Unetbootin?
5.2 Yumi / Sardu
5.4 Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Studio ImageWriter
6 Uye ndeupi waunoda?
Chii chinonzi Unetbootin?
Unetbootin chirongwa chemahara chinotibvumidza kupisa chero ISO chifananidzo chechero kugoverwa kweGnu / Linux pane chero pendrive. Unetbootin ndechimwe chezvirongwa zvakawanda zvinoita mashandiro aya, asi ichokwadi kuti kusiyana nemamwe mapurogiramu, Unetbootin inobvumira kutsungirira pane USB drive.
Kutsungirira ndiko kumisikidzwa kunotibvumidza isu kushandisa chikamu cheiyo USB yekuchengetedza mune iwo mauniti ane ISO mufananidzo wakanyorwa kubva kuGnu / Linux kugovera. Kana isu tichingoda chete kushandisa iyo USB sedhiraivhu yekumisikidza kugovera, kuve kana kusava nekushingirira hakuna kukosha asi kana tichida kushandisa iyo ISO Image seLiveCD, saka kushingirira kunotibatsira kuchengetedza magwaro atinogadzira patinenge tichishanda iyo liveCD pamwe nekugadzirisa kwatinoita kuLiveCD.
Unetbootin inokutendera iwe kuti uite izvi zvese, asi zvakare Zvinotibatsira kurodha yazvino vhezheni yeiyo ISO mufananidzo uye nekuichengeta kune iyo pendrive pasina kuenda kune yepamutemo webhusaiti kana kutsvaga chifananidzo kuburikidza neyedu dura.
Unetbootin ine webhusaiti yepamutemo izvo zvinotibvumidza kurodha pasi chirongwa chekumisikidza nekuchiisa mune yedu Gnu / Linux kugovera pamwe nechero chekushandisa system. Asi, kubudirira kweUnetbootin kuri mune kuiswa kwayo. Nekukanganisa, Unetbootin yanga iriko muUbuntu uye mune ayo ese epamutemo makwikwi. Izvi zvinoita kuti vashandisi vazive nezvechirongwa ichi kugadzira mabotable pendrives neshanduro dzeUbuntu kana kumwe kugovera. Asi izvi hazvisi mune dzazvino vhezheni dzeUbuntu uye kana tichida kuiisa isu tinofanirwa kuvhura iyo terminal uye tinyore zvinotevera:
Kana, kune rumwe rutivi, isu tine kumwe kugoverwa senge fedora, ipapo tinofanirwa kuita zvinotevera:
sudo dnf install unetbootin
Kana tikashandisa Arch Linux kana zvigadzirwa zvayo, ipapo tinogona kuisa Unetbootin nemirairo inotevera:
pacman -S unetbootin
Uye mukati OpenSUSE Tinofanira kunyora zvinotevera kuisa Unetbootin:
With ichi tichava eIyo Unetbootin chirongwa chakaiswa pane yedu Gnu / Linux kugovera asi hachizove chinhu chega chatinoda kuti tikwanise kushandisa chirongwa ichi nemazvo uye nekugadzira bootable USB.
Chii chandinofanira kushandisa Unetbootin?
Kuti ushandise Unetbootin nemazvo tinoda zvimwe zvinhu kuti mhedzisiro ive yakarurama. Kana isu tikamisa Unetbootin pane kugoverwa kweGnu / Linux, chinhu chekutanga chatichazoda chiri iva neinternet kubatana. Sezviri pachena tinoda pendrive yekuisa iyo ISO mufananidzo wekuparadzira. Senguva dzose Zvinokurudzirwa kuve nependrive inokwana 4 Gb yekukwanisakunyangwe iwe uchikwanisa kupisa bhizinesi kadhi saizi ISO chifananidzo chinoda hushoma hunyanzvi.
Tichada zvakare iyo ISO mufananidzo wekugovera kwatinoda kupisa. Kugoverwa kwakakurumbira kunogona kutorwa pasi kuburikidza neiyo Unetbootin chirongwa asi kana tichida kurekodha yazvino vhezheni yekuparadzira kana kugovera isiri mukati merondedzero yekushandisa, seManjaro.
Mashandisiro ekushandisa Unetbootin?
Iyo Unetbootin chishandiso chiri nyore kwazvo kushandisa. Mushure mekuita imwechete skrini senge ino ichaonekwa.
Sarudzo yekutanga (inozomisikidzwa nekusarudzika), Distribution, isu tinofanirwa kusarudza iyo Distribution iyo yatinoda kurodha pasi, ipapo vhezheni yatinoda uyezve tinofanirwa kuenda kuzasi muType, kupi Tichasarudza USB Dhiraivha uye muDhiraivhi tinotara dhiraivhu iyo kugovera kwedu kwayakapihwa pendrive Ipapo tinobaya "OK". Ipapo maitiro ekugadzira iyo bootable pendrive ichatanga. Zvinotora maminetsi akati wandei se Unetbootin kurodha pasi iyo ISO mufananidzo uye wozogadzira iyo flash drive. Kana isu tiine chinononoka kubatana, zvisikwa zvinogona kupfuura awa.
Sarudzo yechipiri, iyo yandinofarira ndeyangu yekutarisa iyo Image Disk sarudzo. Isu tinosiya iyo ISO sarudzo yakasarudzwa uye tobva tadzvanya bhatani nematavi matatu kuti tiwane iyo ISO mufananidzo wekugovera watinoda kushandisa. Sezvo iwe usingafanire kurodha chero chinhu, maitiro acho anokurumidza kupfuura apfuura. MuYuniti isu tinosarudza iyo pendrive yuniti uye tinya bhatani OK.
Pazasi pechisarudzo "Disc kana Image" panowanikwa chinyorwa chinoti "Space yekuchengetedza zvachose data, mushure mekumisikidza (Inowanikwa chete kuUbuntu)" uye bhokisi rine nhamba yatinogona kugadzirisa kuitira kuti Unetbootin igadzire iko kutsungirira kunotibvumira kuchengeta zvinyorwa, data, nezvimwe ... pendrive ine hukuru hukuru ipapo tinogona kuganhura iyo pendrive nehafu yenzvimbo kana kunyangwe zvakadaro, kugadzira kwete chete bhootable pendrive asiwo chishandiso chine simba.
Ndedzipi dzimwe nzira dziripo kune Unetbootin?
Anokwikwidza anonetsa Unetbootin parizvino anonzi Etcher. Ichi chirongwa chakagadzirwa neElectron tekinoroji uye ine yakapusa uye minimalist interface iyo inotibvumidza isu kupisa iyo ISO chifananidzo pane chero pendrive uye kuti iite bootable. Kusiyana neUnetbootin, Etcher haina kurodha pasi iyo ISO mufananidzo wekugovera kwatinoda kwatiri. Asi kuenderana pamwe nekuparadzirwa kwakatokura kana zvichibvira pane neUnetbootin. Tinogona kuwana Etcher kuburikidza neyako zviri pamutemo webhusaiti.
Yumi / Sardu
Makore apfuura, mukwikwidzi weUnetbootin akazvarwa izvo zvisina kungotibvumidza isu kugadzira bootable pendrive asiwo isu tinogona kushandisa akati wandei ISO mifananidzo pane imwechete pendrive. Aya mapurogiramu akazvarwa kwekutanga paWindows asi akaunzwa kuGnu / Linux zvichiita kuti zvive nyore kugadzira tsvimbo ye USB inotakurika nemhando dzakasiyana dzeGnu / Linux. Maturusi aya akanaka kana tichida kuisa kugoverwa kweGnu / Linux uye isu hatizive kuti ndeipi inoenderana nekombuta. Muchiitiko ichocho tinogona kudhawunirodha zvakagoverwa zvakawanda wobva wasarudza iyo inoshanda zvakanyanya pakombuta. Tinogona kuwana Yumi kuburikidza naye zviri pamutemo webhusaiti.
Dd rairo kubva kuGnu / Linux kugovera izvo inotibvumidza kupisa mufananidzo weIO pane chero dhiraivha kana dhisiki rakaomarara uye zvakare kuti iyo ISO chifananidzo chiitwe. Iwo akanaka mapoinzi enzira iyi ndeyekuti haidi zvinowedzerwa zvivakwa uye inokurumidza kupfuura chero chero chishandiso; chinokanganisa ndechekuti ruzivo rwemberi runodikanwa uye harubvumidze kuenderera kwekugadzira kana ISO mufananidzo kurodha kwatiri.
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Studio ImageWriter
SUSE Studio ImageWriter idiki Chishandiso chiri nyore kwazvo chinogadzira bhatable pendrive nekukurumidza asi graphical. SUSE Studio ImageWriter inonyanya kushandisa iyo dd yekuraira asi inopa hushamwari interface yevanoshandisa novice. Tinogona kutora chishandiso ichi kuburikidza iyo yepamutemo webhusaiti.
Uye ndeupi waunoda?
Panguva ino, vazhinji venyu muchasarudza Unetbootin uye vamwe vachasarudza chimwe chishandiso. Ini pachangu ndinofunga kuti Unetbootin hachisi chakashata chishandiso. Ndinotenda izvozvo kukanganisa kwakaitwa kana uchiibvisa kubva kuzvazvino Ubuntu shanduro uye ndinofunga kuti kunyangwe uine makore mazhinji, chishandiso chikuru. Ichokwadi ndechekuti mazuva ano hapana chishandiso chinopa mukana wekutora ISO kwatiri. Chinhu chinobatsira kune vashandisi veavice Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Unetbootin, chishandiso chikuru chekugadzira mabhatani pendrives
Ini ndinonamira neMintStick, chishandiso chekugadzira Linux Mint bootloaders. Ndiyo yakandishandira zvakanyanya pamwe neiyo inobva kuSUSE.
Unetbootin yaigara ichindipa matambudziko, uye mamwe ma distros anokurudzira kupokana nekuishandisa.
Ini ndinogara neetcher, yakanyanya kupusa, inoshanda kune ese maDistros uye zvakanyanya kukosha, haina kumbokundikana, kusaburitsa moto kunouraya kusvika pakufa
Ini ndinoshandisa SUSE Studio ImageWriter, nekuti ini ndinoshandisa manjaro uye ndiyo yakakurudzirwa muwiki. Pandaishandisa ubuntu, ndaishandisa unetbooting, asi yakawanda yenguva iyo pendrive haina kutanga, kudzamara ndaneta neyangu kutyora system uye ndaifanirwa kudzoreredza pandakagadzirisa madhiraivhita emifananidzo uye pawakaisa application iwe waifanira kutanga wedzera iyo repository, apt -get nezvimwewo, nezvimwewo, manjaro ndinokanganwa zvese izvozvo uye ndinonakidzwa nehurongwa hwangu hwekushandisa uye kunze kwekusaita chero chinhu kuisa / kugadzirisa madhiraivhodhi emifananidzo uye kuti haape matambudziko, mhodzi dzakaiswa ne kamwe chete.
Ini ndinoshandisa yekupedzisira 2 uye woeusb kana ndichifanira kuisa mamwe windows. uye nenzira, ndine amd x2 5600 komputa yakatengwa muna 2008 uye linux usb booters anondishandira. Hongu handina kuzviedza muna2008 asi ndinoziva kuti mugore ra2012 na13 vaindishandira
Mufananidzo wezvaiitika wakanaka!
3 yeakanakisa emahara dzimwe nzira dzeCcleaner paLinux
Macchanger: chishandiso chekuchinja iyo MAC kero yekombuta yako